काठमाडौँ । हाल मलमासको समय रहेको छ । मलमासका समयमा शुभकार्य नगर्नु उचित मानिन्छ । सेप्टेम्बर १८ बाट सुरु भएको मलमास अक्टोबर १६ सम्म हुनेछ । यस क्रममा धर्म, कर्म, शुभकार्य, यात्रा, योग, साधना र आहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
मलमासमा के नखाने ?
यस अवधिमा मांसहार नगर्नु उत्तम मानिन्छ । पुरोषोत्तम मासमा यी खानेकुराहरु खान वर्जित गरिएका छन् ।
फूलगोभी, मह, चामलको माँड, सरसों, दाल, गाजर, मूला, प्याज, लसुन, भेन्टा, चना, बासी अन्न, तेल, मादक पदार्थ आदि खानु हुँदैन।
घर बाहिर बनेको खान पनि खानुहुँदैन ।
मलमासमा के खाने ?
गहुँ, चामल, मटर, तील, केरा, दही, ध्यु, आँप, पान सुपारी, अमला, जिरा, सिधेँ नुन कटहर, मेथी आदि खाने सकिनेछ ।